बाबु छोरा भन्दा पनि हामी साथी जस्तै छौ —मोहितवंश आचार्य - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १३:४७
जन्मदिनको शुभकामना बुबा । आई लव यू । यसरी नै सबैलाई माया गर्दै जानु । त्यही हो ।
हरि दाईलाई तपाई बुबाको रुपमा कुन रुपमा चिन्नु हुन्छ?
तपाईहरुले हेर्दा हरिवंशको छोरा उहाँ कस्तो होला के होला घरमा पनि हसाई रहनु हुन्छ होला भन्छन । प्राय सबै जनाले उहाँले घरमा कतिको हसाउँनु हुन्छ भनेर सोध्छन । तर, हामी बीचमा भने सामान्य बाबु छोराको नै सम्बन्ध रहेको छ । अहिले आएर भनौ बाबु छोरा भन्दा पनि हामी साथी जस्तै छौ ।
हँसाई रहने बुबाले कहिलेकाही रुवाउनु भएको छ कि छैन तपाई लाई ?
खोइ म बदमास नभएर पनि होला त्यसरी गाली खान पनि परेको छैन । पिटाई त परको कुरा भयो । कतिपय कुरामा उहाँले मलाई सल्लाह भने दिने गर्नु हुन्छ । यो गर्र्दा यसो गर्दा राम्रो होला भनेर । तर, त्यस्तो गाली गर्ने त्यो नकारात्मक रुपमा भने छैन ।
बुबा धेरै रिसाएको समय सम्झिनु हुन्छ?
बुबा त्यस्तो धेरै रिसाएको भनेको क्षण कहिले पनि छैन । कहिले काही बच्चा छँदा यस्तो नगर उस्तो नगर भन्ने पक्कै पनि हुन्थ्यो होला । तर, त्यस्तो याद नै हुने गरी रिसाएको भनेको कहिल्यै पनि छैन ।
भने पछि तपाईले मौका दिनु भएको छैन?
मेरो ठाँउबाट मैले नदिएको पनि हुन सक्छ । उहाँले त्यो कुरालाई किन रिसाउनु त्यही कुरालाई मायाले सम्झायो भने अझै सम्झेला भनेर गाली नगरेको पनि हुन सक्छ । तर, मैले त्यस्तो फटयाई काम गरेको पनि छैन । कहिले काही चित्त नबुझेको छ भने पनि सम्झाई बुझाई गर्ने बानी उहाँको छ ।
हँसाउनु पर्यो भने जोक्स गर्ने काम चाहि कसको हुन्छ ?
हाम्रो घरको वातावरण नै रमाईलो हुन्छ । जोक्स भन्नाले अब म हसाउँछु है भनेर हैन कि गफ गर्दै जादाँ कहिलेकाही त्यस्तै परिस्थिती आउँन सक्छ । त्यो समय वातावरण रमाईलो हुन्छ ।
तपाई पनि कलाकारितामा आईरहनु भएको छ । तर दोस्रो पुस्ताहरु त्यसरी आएनन भन्ने कुरा छ । तपाईलाई बुबाको जस्तो स्टारडम पाउँने ईच्छा छैन?
मैले एक्टिङ्ग पुरै फोकस गरेर यो क्षेत्रमा आएको कहिल्यै पनि छैन । उहाँहरुको नै सिरियल स्टेज प्रोग्राममा भने कहिले काही जति सकिन्छ त्यसरी गरेको हो । मैले एक्टिङ्गलाई पुरै समय दिएर मलाई दोष लागेको भए मलाई प्रेसर हुन्थ्यो होला । मान्छेहरुले भन्थे पनि होला । तर आज सम्म म अहिले सम्म सेमिप्रोफसनल वे मा मात्र आईरहेको छु । त्यसैले मान्छेले यसले आएर पनि गर्न सकेन भने भन्न सक्नु भएको छैन ।
तपाई म चाहि हरिवंश आचार्यको छोरा मोहितवंश आचार्य भनेर चिनिदा गर्व महसुस गर्नुहुन्छ भनेर सुनेको थिए । अरुले म आफ्नो नामबाट चिनिन चाहन्छु भन्छन तर तपाई म बुबाको नामबाट चिनिदा पनि खुशी छु भन्नुहुन्छ त्यो किन?
मलाई एकदमै खुशी लाग्छ । किनकी संसारमा म र मेरो दाईले हाम्रो बुबा हरिवंश आचार्य हो भन्ने त्यो सौभाग्य पाएका छौ । त्यहीभएर यसमा नराम्रो लाग्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । झन त्यो त एउटा खुशीको कुरा हो ।
हाँस्य विधामा आएका भर्खरका कलाकारहरु जो हरिदाई संग काम गर्ने वा उहाँको छत्र छाँयामा बस्न खोज्ने र म हरिदाई मदनदाईको छोरा जस्तो हो भन्ने सुन्दा त्यो बेलामा कस्तो लाग्छ ?
यो कुराले गर्दा मलाई जहिले पनि आफू भाग्यमानी घरमा जन्मिन पाए भन्ने हुन्छ । एउटा राम्रो मान्छेको घरमा जन्मिन पाए भन्ने जहिले पनि हुन्छ । कसैको मेरो पनि यस्तो भईदिए हुन्थ्यो भन्ने ईच्छा हुन्छ होला । तर, सबैको आफ्नो आफ्नो विषेशता हुन्छ । तपाईको बुबाको पनि आफ्नो विशेषता छ र तपाई त्यो कुरामा गर्व महसुस गर्नुहुन्छ होला । तर, यो कुरामा नराम्रो मान्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन ।
अरु बेलामा नभए पनि किशोर अवस्थामा त बुबा संग तपाईको मनमुटाव भएको कुनै दिन होला ?
त्यस्तो खासै केही पनि छैन । हामीले जीवनमा त्यस्तो ठूलो निर्णय लिनुपरेको क्षण त्यस्तो केही पनि छैन ।
तपाई अहिले त हरिवंश दाईको साथी जस्तो हुनुभएको छ । अहिले सम्मत पाईले उहाँ रुनु भएको कहिल्यै देख्नुभएको छ ?
बीचमा हाम्रो परिवारमा केही दुखान्त घटना घटेको थियो । त्यो बेलामा मेरो दाई केही समयको लागि आएको थियो । पछि ऊ पनि फर्किनु पर्यो । त्यो बेलामा हामी मात्र थियौ । त्यो बेलामा उहाँको सहारामा मेरो सहारा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । जीवनमा त्यस्तो घटना आउँछ कहिलेकाही । त्यस्तो घटना घटेको थियो । त्यो बाहेक अरु घटना भने छैन ।
तपाईले थाहा पाए अनुसार बुबालाई एकदमै मर्का परेको पल?
त्यस्तो ठूलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्तो अहिले सम्म केही पनि भएको छैन । कहिलेकाही त्यस्तो हुन्थ्यो होला अरुलाई यही कुरा पर्दा मर्का पथ्र्यो होला । तर, बुबालाई त्यस्तो सानो कुरा केहीभयो भने पनि सपोर्ट गर्नको लागि साथीभाई, अडियन्स देखि लिएर मिडिया सम्म सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो भएर उहाँलाई केही कुरामा समस्या पर्न दिनुभएको नै छैन ।
हरिवंश आचार्यको छोरा हुदाँ फाईदै फाईदा होला । त्यो मध्येमा बेफाईदा चाहि के?
बेफाईदा खोई मैले अहिले सम्म केही पनि देखेको छैन ।
तपाई संग हँसाउने खुवी चाहिक तिको छ अथवा डिमान्ड आईहाल्ने कतिको छ?
अब म साथीभाईहरु संग अलिकति खुलेर बोल्ने र हँसाउने गर्छु होला ।
हरिवंश दाईलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने धेरै हुुनुहुन्छ । उहाँ सेलिब्रेटी हुँदा विभिन्न खालको मान्छे भेट्न आउँछन नि त्यो तरिकाले कतिको दुख पाउने वा खुशी पाउने कतिको छ?
उहाँलाई भेट्न आएन भने चाहि दुख हुन्छ होला किनकी एउटा कलाकारको लागि मान्छेले जति घेरी दियो जति बोल्न आयो जति फोटो खिच्न आयो जति कुरा गर्यो त्यो राम्रो हो । त्यो उहाँहरुको लागि एक किसिमको सम्मान नै हो । त्यसमा गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि हुदैन ।
सेलिब्रेटी हुँदाआफ्नो व्यक्तिगत जीवन बिताउन सक्दैनन होला भन्ने छ । त्यस्तो खालको केही प्रतिक्रिया छ?
कुनै आर्टिस्टले त्यसलाई कुनै नराम्रो किसिमले लिन्छ भने उसले त्यो पेशा नै बुझेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनकी यो लाईनमा आउँनु अघि नै ऊ पुरै तयार हुनु पथ्र्यो कि म एउटा पब्लिक फिगर भईसके पछि चाहि जे बोले पनि, जे गरे पनि न्यूज हुन्छ । बरु त्यो कुरा भएन भने चाहि उसले मेरो दिन सकियो भन्ने कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।
बुबाको के चिज तपाई संग भईदिएको भएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
उहाँको हरेक कुरा भईदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । एउटा मान्छेको रोल मोडल नै घरबाट हुन्छ भन्छन । कसैले आफ्नो बुबा आमालाई हेरे म यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ । उहाँको सबै बानी राम्रो छ ।
स्कुल जाँदा खेरी देख्ने बुबाको अनुहार र अहिलेको ठूलो हुँदा खेरीको बुबामा के अन्तर पाउँनु हुन्छ ?
म जन्मेको उन्नातिस वर्ष भयो । त्यो बेलाको र अहिलेकोमा धेरै अन्तर हुन्छ । त्यस्तो धेरै परिवर्तन भने छैन । मेरो अरु साथीको बुबा हाम्रो बुबाकै उमेरको हुनुहुन्छ । उहाँहरु अलि बूढो देखिनुहुन्छ तर उहाँ अझै जवान नै हुनुहुन्छ ।
फिट रहन हरिवंश दाईले के गर्नुहुन्छ?
उहाँले बिहान जहिल्यै एक्सरसाईज गर्नुहुन्छ । योगा गर्नुहुन्छ । उहाँको पेट मात्र लागेको हो । त्यो घटाउन अलि बेर लाग्छ । त्यो बाहेक एकदमै फिट हुनुहन्छ जस्तो लाग्छ ।
पेट घटाउन तपाईले केही उपाय दिनु भएन?
म आफूलाई नै वजन घटाउनु पर्ने छ । मैले बुबालाई भन्दा पनि बुबाले मलाई एक्सरसाईज गरेको पुगेन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ ।